Rikooradii laga bartay kulankii Barcelona iyo Juventus. | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Rikooradii laga bartay kulankii Barcelona iyo Juventus.
Rikooradii laga bartay kulankii Barcelona iyo Juventus.
April 20, 2017	26 Views
Kooxda Juventus ayaa laba kulan oo xiiso badan oo ay la ciyaartay kooxda Barcelona kadib waxaa ay ku guuleysatay inay ugudubto wareega xiga iyaga oo shabaqooda ka ilaashaday.
Kooxda Talyaaniga ah ayaa iminka 180 daqiiqo oo kaliya ujirta inay ciyaarto Final-ka Champions League ee ka dhacaya 3 June Cardiff.
*Kooxda Juventus ayaa ku biirtay kooxaha Manchester United iyo Bayern Munich kuwaasi oo kulamadii wareegan oo kale ka adkaatay kooxda Barcelona iyaga oo shabaqooda ka ilaashaday.
*Guushii iyo soo bixitaankii Juventus ayaa la micno ah in kooxda Talyaanigu ay noqotay kooxdii Saddexaad ee wareegan Barcelona kaga adkaata iyada oo aysan gool ka dhalin waxaa horay sidan oo kale usameeyay kooxaha kala ah Manchester United oo 2007/2008 sameysay tar-tanka ayeyna ku guuleysatay , Bayern Munich oo 2012/2013 sameysay tar-tan kana ku guuleysatay & kooxda Juventus oo sanadkan sameysay lagana war sugayo sida uu noqdo Final-ka.
*Gool hayaha kooxda Juventus ayaa iminka 46 kulan shabaqiisa gool ka ilaashaday waayaha Champions League waxaa ka horeeya kaliya Iker Cassilas oo 54 kulan shabaqiisa gool ka ilaashaday Edwin van der Sar oo 50 kulan sameeyay & Petr Cech oo 47 kulan sameeyay ayaa ka badan.
* Gool haye Gianluigi Buffon ayaa sanadkan Champions League ka ciyaaray 9 kulan 7 kamid ah shabaqiisa wax gool ah lagama dhalin kaliya 2 gool ayaana laga dhaliyay.
*Markii ugu dambeeysay oo ay Juventus ku guuleysato tar-tanka Champions League waxa ay aheyd 1996 waxaana ay sanadkan doonayaan inay dib ugu soo laabtaan masraxa Uerope.
*Lionel Messi ayaa sameeyay 5 laad oo aan bartil maameed aheyn waana markiisii ugu horeysay ee uu sidan oo kale sameeyo tan iyo September 2015 markaa oo uu sidan oo kale sameeyay 5 shoot kulan ay koxodiisu wajahday kooxda AS Roma.